Barcelona oo iska diiday inay ka niyad jabto soo xero galinta xidig ay ku fashilantay saxiixiisa suuqii xagaaga – Gool FM
Barcelona oo iska diiday inay ka niyad jabto soo xero galinta xidig ay ku fashilantay saxiixiisa suuqii xagaaga
(Barcelona) 04 Sab 2018. Barcelona ayaa wali isha ku heysa sida ay u sameyn lahayd saxiix cusub oo ay ku xoojiso safka kooxdeeda, kadib markii ay ku fashilantay inay sameyso saxiiixan suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee kasoo baxa gobolka Catalonia ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in kooxda Barcelona ay sii wadi doonto dagaalka ay ugu jirto soo xero galinta laacibka reer Holand iyo kooxda Ajax Frenkie de Jong.
Kooxda Ajax ayaa iska diiday suuqii xagaaga inay fasaxdo Frenkie de Jong, halka laacibka uu isna sheegay inuu xiligan doonayo in uu kusii sugnaado safka kooxdiisa si uu kaga qeyb galo tartanka Champions League.
Si kastaba kooxda Barcelona ayaan kali ku ahayn raacdada loogu jiro saxiixa Frenkie de Jong maadaama ay sidoo kale doonayaan kooxaha Tottenham iyo Paris St Germain.
Sidaas darteed kooxda Barcelona ayaa kor u qaadi doonta tallaabada ay ku soo xera galineyso saxiixa de Jong, kaasoo ku qiimeysan aduun dhan 50 ilaa iyo 60 milyan euros.
Julen Lopetegui oo jawaab cad ka bixiyay wareysi uu dhawaan Messi kaga hadlay kooxda Real Madrid
Jose Mourinho oo wajahaya hal sano oo XABSI ah iyo qaabkaan oo uu uga badbaadi karo!